ကျနော်ဥာဏ်ကောင်းတဲ့လူတယောက်တော့မဟုတ်ဖူးဗျ... ~ Myanmar Anti Mlm Group
9:51 AM Taste It Myanmar
ဇာတ်လမ်းအစကဒီလိုဗျို့ကောင်လေးတြောက်ကကျနော့်ကိုချက်ဘောက်ကနေလာပြောတာ..ကိုပေါက် network marketing သိလားတဲ့.. ငပေါက်ကလဲ networking ကွန်ပျူတာတွေချိတ်တာဆက်တာနဲ့နားရှန်းသွားပြီးသိဘူးလို့..
နောက်မှအဲ့ကောင်လေးကဆက်ပြောတာသူ့တို့အိမ်ကိုသူ့အမေအသိဘွားတော်တယောက်ကရွှေတွဲလောင်းငွေတွဲလောင်းနဲ့..လာပြီး MLM တွေဇွတ်တရားဟောတယ်ပေါ့..ဘယ်နလ ကြာရင်ဘာကားကြီးစီးရပြီ.. စပါယ်ရှယ်အမှတ်ဘယ်လောက်ရပြီးဒိုင်းမွန်းပလက်တီနမ်ဘာညာ..မန်လဘာကြီးဖြစ်ရင်ပြိုင်ကားကြီးစီးနိုင်မှာ..စောင်သူဌေးဆိုတဲ့လူကြီးတွေက.ဘယ်နိုင်ငံခြားကိုဘယ်လိုပို့မှာဆိုတဲ့အကြောင်း...ရွှန်းရွှန်းဝေ..လျှမ်းလျှမ်းဖောက်အောင်လာပြောတယ်တဲ့.. လိမ်နေမှန်းကျနော်သိတယ်ဒါပေမဲ့ချက်ကျကျဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိဘူးတဲ့အာ့ကြောင့်ကျနော့်ကိုမေးတာတဲ့..
ကိုယ်ရတာပဲမြငိနေကိုယ့်အထက်ကလူက..အလကားနေရင်းကိုယ်ရတာထက်နှစ်ဆရနေပြီလို့..ပြန်ပြောလိုက်လို့...ပြိးအဲ့ဆယ်သိန်းဖိုးလာဘာလားဝယ်ထားရတာကလဲတစ်လနဲ့မပြီးဘူးလတိုင်းယူရတာ..ကန်တော့ပါရဲ့ကျတော်သူငယ်ချင်းတယောက်ရေးထားသလိုဆို ဘာလုပ်ဘာခံလုပ်ငန်းဆိုပဲ..ဟုတ်တယ်လေကိုယ်ကအုပ်ခံရတယ်ပိုက်ဆံလဲပေးရတယ် ကိုယ်ကပြန်ဆော်ရမယ့်ကိုယ့်လူအချဉ်နှစ်ကောင်ပြန်ရှာရတယ် ကိုယ့်အထက်ကကေင်ကအဲ့သုံးယောက်လုံးကိုဆော်မယ်..မိုက်ရိုင်းပေမဲ့ အမှန်တရားဖြစ်နေတာကိုး..
ကျနော်လဲခဏခဏကြုံဖူးတယ် သူငယ်ချင်းရာတဲ့မင်းကဆရာဝန်ဆိုတော့ငါတို့အဖွဲ့ထဲဝင်ပါ့လား..တဲ့. ငါတို့ဆေးရောင်းရင်ဆရာဝန်ကညွှန်တာဆိုတော့ပိုရောင်းကောင်းတာပေါ့တဲ့..ဘာမန်ဘာကြေးမှမပေးနဲ့တဲ့ဝင်ပဲဝင်ထားမြတ်သမျှပေးမယ်တဲ့. ကျနော်ကလဲ သူငယ်ချင်းလို့.ငါလူနာပဲကုတယ်လို့ ငါဆေးမရောင်းချင်ပါဘူးလို့.chemical compound name generic name ဘာညာပါတယ်ကိုယ်လေ့လာထားတဲ့ဆေးဆိုလူနာလိုရင်ပေးဦးမယ် အခုဟာကဘာမှန်းမသိတဲ့ဓာတ်ဆာလိုလို..ဘာလိုလိုဆေးတွေတော့ငါမရောင်းနိုင်ဘူးကွာလို့..ကျင့်ဝတ်နဲ့မညီပါဘူးလို့..ပြောလွှတ်လိုက်ရတယ်.အဲ့အသိက.နောက်ထပ်သူငယ်ချင်းဆရာဝန်မလေးတယောက်ကိုလဲသွားစည်းရုံးတာ..ဟ်ုကအဲ့လိုပဲပြောလွှတ်လိုက်တယ် မင်းတို့ဆရာဝန်တွေကကြီးကိုကျယ်တယ်တဲ့..သူတင်းသွားပြီးကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ကိုကိုမခေါ်နိုင်မပြောနိုင်ဖြစ်လိုက်သေးတယ်။ တချို့ဆရာဝန်တွေလဲအဲ့ဟာတွေကိုချိန်းခြောက်ချော့ငေါက်ပြီး..လူနာတွေကိုရိုက်ပုတ်လှည့်သွင်းပြီးရောင်းစားနေတာတွေ့နေရတာလဲ စိတ်မကောင်းဘူး..။
ရောင်းတဲ့ဆေးတွေလဲကြည့်ဦး..သဘာဝထုတ်တဲ့ဘာညာကွိကသွေးသန့်ဆေးတော်ကြီး..အူသန့်ဆေးတော်ကြိ်းဘာညာလင်ဇီးရှောက်ပေါင်းမှိုစပါယ်ရှယ်အမေရိကားကစောင်တရုတ်ဆေးတော်ကြီးဓာတ်ဆာတွေတဲ့.ဘာ chemical မှမပါဘူးသဘာဝတဲ့.နင်မေလ့ခွမ်းလား chemical မပါပဲနငိ့အပင်တွေကနေသူ့ဖာသာသူစောင်ဆေးပြားဆေးလုံးလေးတွေဖြစ်လာသလားဟဲ့လို့ငေါက်လိုက်တော့အမြီှးကုတ်ပြေးတယ်
.လာရောင်းတဲ့လူကလဲပြောပြပါလိမ့်မယ်.. သူ့ရဲ မဇ္ဇုသက္ကနတ်ပန်းဆေးတော်ကြီးတွေမသောက်ရင်ပဲ ၉၆ပါးရောဂါဝင်.ပိန်ခြုံးချိနဲ့မဲကျုတ်လိန်ပိန်ပြီး..အလကားနေသေရတော့မလို..
သူ့ဆေးသောက်ရင်ပဲ ၆၁နှစ်အဘွားကြီးက ၁၆နှစ်မလိုဖလန်းလန်းထပြီးလန်းဆန်းကြွ လာတော့မယ်အတိုင်း..ပြောပြရောင်းပြပါလိမ့်မယ်..
ရှိသေးတယ်ကျနော့်ဆရာတယောက်ကြုံတာနယ်မှာသူအလည်သွားတဲ့အိမ်ကိုအဲ့လိုကောင်တကောင်ရောက်လာပြိ်ီးဆေးရောင်းတယ် ရိုးသားတဲ့တောသုတောင်သားတွေခင်ဗျာသူ့စကားရေယဉ်ကြောမှာ ဖော်လို မြောပြီးမြို့က ultrasound ရိုက်ထားတဲ့အဖြေပါသွားပြမိတယ်..အဖြေက NAD နော် ဘာပြဿနာမှမရှိဖူး အဲ့တာကိုကြည့်ပြီးခင်ဗျားအသဲကတခြမ်းပျက်နေပြီတဲ့.. သူ့ဆေးကို၂နှစ်သောက်မှပြန်ကောင်းမယ်တဲ့..လောဘနော်လောဘ ဘယ်လောက်ထိကြောက်ဖို့ကောင်းသလဲ အဲ့အချိန်ကျနော့်ဆရာကအပေါ်ထပ်ကနေကြားလို့ဆင်းလာပြီး..ပြစမ်းအသဲတခြမ်းပျက်တယ်ဘယ်နားရေးထားလဲ..ပြစမ်းဆိုပြီးဝင်ချဲတယ် ထိုးမယ်ကျိတ်မယ်တကဲကဲလုပ်မှ ငနဲကသူ့အထုပ်သူမပြေးတာ..အဲ့လို..ဟိုဆရာဝန်ကလဲလူပုစိတ်တိုရယ်..ဒါတောင်သူသိတဲ့အိမ်တအိမ်ပဲရှိသေးတာနော်.. အဲ့ငနဲသားကတနယ်လုံးပတ်ပြီဒီအကွက်တွေနဲ့လှိမ့်သွင်းနေတာဘယ်နအိမ်ထောင်မိသားစုရှိမလဲဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူး သိပ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်..ကျနော်ကုမ္မဏီအမျိုးမျိုးဆေးအမျိုးမျိုးတွေ့ဖူးတယ်နာမည်တွေသာကွာသွားတာ အခြေခံသဘေါတရားကဒါပဲ..
နယ်တွေကလူထုခင်ဗျာ ဆေးရုံဆးခန်းကလဲကောင်းကောင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံသိပ်မရှိရှာ လူတွေကိုယ်တိုင်ခဗျာများမှာလည်းဗဟုသုတအတွေ့အမြင်ကနည်း ဆေးရုံဆေးခန်းသွားရမှာကြောက်..ဆေးမြှီတိုတွေဓာတ်စာတွေကိုပဲအားကိုးဆိုတော့ဒင်းတို့စားဂွင်ပါပဲဗျာ..
ခုတော့နယ်ကလူမှမဟုတ်ပါဘူး ဒီနိုင်ငံမျာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းကနဲပါး အလွယ်နည်းနဲ့ဖြတ်လမ်းလိုက်သူဌေးဖြစ်ချင် စဉ်းစားချင့်ချိန်တွေးခေါ်သုံးသပ်နိုင်တဲ့အသိပညာကအားနည်းလေတော့.. သူတို့အပြောကောင်းသလောက်ပါကြတော့တာပဲစိတ်မကောင်းစရာ..
ကျနော်လဲဆေးပညာအသိုင်းအဝိုင်းကလူပါ လူနာကိုကောကိုယ်ကိုတိုင်ကော မလိုအပ်ရင်ဘာဆေးမှကိုမတိုက်တာမသောက်တာ..ဆေးတွေအရမ်းများရင်ကျောက်ကပ်တို့အသဲတို့ကပိုအလုပ်လုပ်ရသေးတယ်လေ..အန္တရာယ် ​များတယ် အဲ့လိုအယူအဆနဲ့လူဆိုတော့ ဒီလိုကောင်တွေဆိုနဲနဲလေးမှကိုကြည့်မရတာ..
ခုတော့တော်တော်လဲသိနေကြပါပြီ..online မှာကိုဇေက ဒီ MlM တွေကပြည်သူလူထုကိုအကျိုးများသလားအကျိုးယုတ်စေသလား စိန်ခေါ်တော့ သူတို့စောင်သူဌေးကြီးက ပထမ show money ပြခိုင်းတယ်ပြလဲပြနိုင်ရော ဘာသာရေးတွေဘာညာလူကြီးလူကောင်းကအလောင်းအစားမလုပ်ဖူးခင်ဗျားလှူလိုက်ပါ့လားဘာညာဆိုပြီး ကလေးနှစ်ကျပ်ကွက်နင်းပြီးပတ်ပြေးတယ် ..debate နဲ့အလောင်းအစားကိုမကွဲဘူး.သူ့ဘာမဟုတ်တဲ့အလိမ်အညာလုပ်ငန်းကို နူးညံ့သိမ်မွှေတဲ့ဘာသာရေးနဲ့နှိုင်းတယ် လူကြီးလူကောင်းက အလောင်းအစားတော့မလုပ်ဖူးလိမ်တော့လိမ်တယ်ပေါ့.လွယ်တော့မလွယ်ဖူး ယုတ်တတ်ရတာပေါ့..
MLM ဆောင်းပါးများ / ကိုပေါက်